Dood ka taagan halka lagu qabanayo Kulanka Baarlamaanka ee lagu horgeenayo Mooshinka Jawaari | Baydhabo Online
Dood ka taagan halka lagu qabanayo Kulanka Baarlamaanka ee lagu horgeenayo Mooshinka Jawaari
Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan halka lagu qabanayo kulanka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee lagu horgeenayo mooshinka laga soo gudbiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Gudoomiyaha Mooshinka uu kuyaalo Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa Warqad uu u qoray Wakiilada beesha Caalamka ee jooga Soomaaliya waxa uu uga codsaday in kulanka codka loogu qaadayo mooshinka laga keenay lagu qabto garoonka Aadan Cadde.
Xildhibaanada Baarlamaanka gaar ahaan kuwa mooshinka ka keenay Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa ka biyo diidan in kulankooda lagu qabto meel ka baxsan xarunta golaha shacabka.
Waxa ay ku doodayaan Xildhibaanadan in ay sharci daro tahay in xarunta oo furan wax dhibaato ahna aysan ka jirin in kulanka lagu qabto goob kale, waxa ayna uga digeen Wakiilada beesha Caalamka in aysan soo faro galin arimaha Baarlamaanka.
Xildhibaanada Difaacaya Gudoomiyaha Baaralmaanka ayaa iyaguna taageersan in kulanka lagu qabto hoolkii lagu doortay Madaxweyne Farmaajo , waxa ayna sheegeen in aysan isku haleyn karin xarunta Baarlamaanka oo ay sheegeen in ciidamo cusub la wareegeen.
Gudoomiye kuxigeenka 1-aad ee Baarlamaanka Cabdiweli Muudey oo hada si KMG ah Baarlamaanka u gudoomiya ayaa laga filayaa in uu shaaciyo halka lagu qaban doono kulanka mooshinka lagu horkeenayo Baarlamaanka iyo waliba xiliga la qaban doono.